Moobayladu waa inay seexdaan - BBC News Somali
Moobayladu waa inay seexdaan
Lahaanshaha sawirka Think Stock
Moobaylada casriga ah iyo tabletka iyo agabka kale ee wax laga akhristo ee elektrooniga ahi waa inay lahadaan hab automaatik ah oo u sheegaya marka lagaadho waqtiga hurdada inay iyana hurdo galaan , sidaa waxaa yidhi Diktoor cafimaadka ah.
Diktoorkan oo ka socda cusbitaalka caruurta ee Evelina Children's Hospital London ayaa sheegay in noocyada cusub ee moobayladu ay yahiin qaar iftiinkoodu sii cadaanayo iyagoo bixinaya midab buluug ah.waxaanu ugu baaqay sharikadaha sameeya qakabkani inay muujiyaan masuuliyad.
Marka ay sii madoobataba habeenkii , jidhku waxa uu soo saaraa hormoonka melatonin kaas oo huradada keena .
Haddaba mawjadaha ilayska qaarkood , gaar ahaan kuwa ah buluuga iyo cagaarka ayaa kahlakhalin kara nidaamka hurdada.
Professor Gringas ayaa ka tirsanaa koox daraasd ku sameeysay ilayska ka yimaada agabka la isticmaalo oo lagu daabayFrontiers in Public HealthJoornalka la yidhaa .
Waxaanay kusoo gunaanadeen darasadooda in agabkani casriga ah ee la isticmaala ay kuwii ka ilays badan yahiin isla markaana ay bixinayaan bidhaamo cadaan iyo buluug ah
Professorkan oo ku takhakhusay hurdada caruurta ayaa BBC-da websaytkeeda u sheegay “in maalintii ay fiican yahiin , lakiin habeenkii ay dhibaato huradada ah leeyahiin” waxaanu intaa ku daray “waxaa jirta darasad ku odhanaysa hadii aad moobayladani hor fadhido inay hurdadaada dib u dhigi karaan saacad dheraad ah”
Waxaana u sheegay in ay jiraan nidaamyo cusub oo dhimi kara iftiinada buluuga ah ee Moobaylada.